Fluffing I-Silicone emulsion yeFowuni kunye nePricelist | I-Honneur
Sebenzisa: I-Fluffing Silicone emulsion PR160 yinto ekhethekileyo ye-silicone emulsion kunye neyona nto ingxamisekileyo yenkqubo yokuqokelelwa kweArhente yokuKhulisa ilaphu elilelona. Ingasetyenziselwa ukunyusa, ukucheba, ukugqiba ukugqiba kwamoteni, i-T / C, i-polyester, i-nylon kunye neendwangu zayo ezihlanganisiweyo. ifaka isibambo velvety, ethambileyo, egudileyo kunye nevolumuyini kwilaphu eliphakanyisiweyo. Ingasetyenziswa ngokudibeneyo ne-flake emulsion kwimilinganiselo eyahlukeneyo ngokwemeko yendwangu.
Inkangeleko: I-Milky white yolwelo
Umxholo oqinileyo: 60%
I-Fluffing Silicone emulsion PR160
Sebenzisa: I-Fluffing I-Silicone emulsion PR160 yinto ekhethekileyo ye-silicone emulsion kunye nezinto ezingundoqo eziluhlaza kwinkqubo UkuphakamisaIarhente yelaphu elingabanjwanga. IngasetyenziselwaUkuphakamisaUkucheba kunye nokukhulisa ukugqiba komqhaphu, i-T / C, i-polyester, i-nylon kunye neendwangu zayo ezihlanganisiweyo. ifaka isibambo velvety, ethambileyo, egudileyo kunye nevolumuyini kwilaphu eliphakanyisiweyo. Ingasetyenziswa ngokudibeneyo ne-flake emulsion kwimilinganiselo eyahlukeneyo ngokwemeko yendwangu.
Ilaphu elenziweyo lenziwe ngenkqubo yokubekwa esweni, ekwabizwa ngokuba kukuphakamisa okanye ukuxubha. Umphezulu wendlu ethe tyaba okanye yelaphu elihlanganyelweyo liphathwa ngeebhulashi ukwenza ubumbeko obuthambileyo nobuthuntu. Imizekelo eqhelekileyo ibandakanya i-flannel, i-moleskin, kunye noboya obucekeceke.
Inyama yenziwa ngokuqhawula ilaphu le-polyester ekhokelela ekuqineni nasekuqiniseni iipokethi zomoya zokufakwa. Ubhambo lubonelela ngomlinganiselo wobushushu obukumgangatho uphakamileyo ngokuthelekiswa noboya be Merino kodwa bungaphantsi kokuya ezantsi okanye izixhobo zokugcwalisa ezenziwe.
Ukushukuma yinkqubo enokuthi isetyenziselwe u-woollens, iicotton, i-spun silk, kunye ne-ray yes spun, kubandakanya zombini iindidi ezelukiweyo kunye nezilukiweyo, ukuphakamisa i-velvety, indawo ethambileyo. Inkqubo ibandakanya ukugqithisa ilaphu ngaphezulu kwee-cylinders ezijikelezayo ezigqunywe ziingcingo ezihle eziphakamisa imisonto emifutshane, evulekileyo, ihlala isuka kwimisonto yeft, ukuya phezulu, isenza umphandle. Inkqubo, eyonyusa ukufudumala, ihlala isetyenziswa koboya kunye nakwiimpawu ezimbi kakhulu nakwiingubo.
Umxholo oqinileyo: Iipesenti ezingama-60
Ixabiso le-PH: 6 ~ 8
Ukunyibilika: inyibilika emanzini
Iimpawu kunye nokufaka iZicelo:
1. Ilungile, ithambile, iyaziva ifuthe, yenza ukuba ilaphu lisebenze lula；
2. Inempembelelo encinci kumbala wombala, ubumhlophe kunye nokukhawuleza kombala
3. Emva kokuba ugqibile, umphezulu welaphu uyigudileyo, usithele ngxi, ufumba ubungqindilili, umqukumbelo ofanayo
4. Inokusetyenziswa kuninzi lweetofile zesilicone kunye nezinye izinto ezincedisayo kwilaphu elinye lokuhlambela, ngokubanzi
isetyenzisiwe kwinkqubo yokugqiba
Kwisitya, gxobhoza i-flake ngamanzi ashushu kwaye uchithe ngokupheleleyo. Emva koko, yongeza iFluffing
I-Silicone Emulsion ngokulinganayo, yivuse ngokulinganayo kwaye uyisebenzise emva kokucoca
1. Isambatho selaphu yePolyester (inqwaba yamakhorali kunye noboya obucekeceke)
Zibuthathaka i-cationic flake 25kg, yongeza i-PR160 malunga ne-50kg, idityaniswe kwi-1000kg; Umthamo: 40-50 g / l
2. Ikotoni eyosiweyo
Zibuthathaka i-cationic flake 40kg, yongeza i-PR160 malunga ne-70kg, idityaniswe kwi-1000kg; Umthamo: 40-50 g / l
Ilaphu elilukiweyo le-T / C (80/20 okanye 65/35)
Zibuthathaka i-cationic flake 30kg, yongeza i-PR160 malunga ne-70kg, idityaniswe kwi-1000kg; Umthamo: 40-50 g / l
4. I-DTY (Zoba umtya wokubhaliweyo) ilaphu elilukiweyo
Ubuthakathaka bento edakumba i-25kg, yongeza i-PR160 malunga ne-50kg, yongeza i-block silicone emulsion 10-20kg,
ukudibanisa ukuya kwi-1000kg Umthamo: 40-50 g / l;
Kwilaphu elihlanganisiweyo, faka ilaphu elibuthathaka ngefake-ionic
Qaphela: le datha ingentla yeyokubhekiswa kuphela, kuxhomekeke kwinkqubo yokwenyani
Ukupakisha: Kubonelelwe kwi-200kg Drum okanye kwi-1000kg IBC
Ubomi beshelufu eliqhelekileyo ziinyanga ezili-12 ukusuka kumhla wokuvelisa kwaye ligcinwe kwimo engafunekiyo yasekuqaleni
isitya nge-2℃~ 30℃. Nceda ugqithisele kwisincomo sokugcina kunye nomhla wokuphelelwa ku-
Edlulileyo: D4 D5 D6 IiSiloxanes zasimahla
Ukucheba kunye nokukhulisa iAgent yokugqibezela; I-silicone i-emulison
Inqanaba lokuSasaza iArhente yokudaya i-polyester
Inqanaba lokumakishwa kwe-acid kunye needayi zangaphambi komgangatho